भारत: एयरफोन लगाएर हिं’ड्दै थिइन्, ए’क्कासी यस्तो भयो कि पत्तो नपाउँदै गु’माइन् ज्यान ! – eSidhakura
आ’फ्नो मृ’तक दा’ईको न्या’यकोला’गि ए’क्लै प्र’हरी प्र’साशनसंग ल’ड्ने चे’लीको शा’हस प्र’ति स’लाम
आफ्नो दाजुको न्या’यको लागी अमेरिका देखि आएकी हिम्मतिली सदिक्षा पाइलट पनि हुन्… हेर्नुस २६ तस्स्बिर
मोटरसाइकल कि’नेर खुसि हुँदै घर फ’र्केका युवक अब कहिल्यै घर नपुग्ने भए…
भा’गर’थी भट्टको श’ब यात्रा शुरु, चल्यो रु’वाबासी, थ’मिनन कसैको आशु…. भिडियो
शे’राघा’टमा भा’गरथिको अ’न्तिम सं’स्कार, राष्टिय झण्डा ओ’डाएर गा’डियो श’ब… भिडियो सहित
दि’नेशले ए’काएक फे’रे ब’यान , अब के होला ?
आफ्नै घर ज’लाएर लड्डु खाँदै हिँड्दा ख’रानीले भ’त्भती पो’ल्ने दिन आउला
ज्ञानेन्द्र शाहीलाई मन्त्रीले ‘तिमी बच्चा छौ बुझेर आउ’ भनेर थ’र्काए, प्रश्न सोध्न पनि नदिएपछि चुप लागे (भिडियो हेर्नुस्)
‘कती सुन्दर कती सिम्पल’ मोडल सारिका केसी, हेराैँ १७ तस्बिर
दाजुको ह त्या पछि न्यायका लागि लडेकी बहिनी सदिक्षाको समर्थन गर्दै मनोज गजुरेल लेखे मन छुने स्टाटस
बीजेपी नेता सु’ब्रमण्यन स्वामीको ट्वीट-‘ओली घर न घा’ट’ भएकै बेला भारतले च’तुर क’दम चाल्नुपर्छ’
जसले आम जनताको विश्वास न्यायालयतर्फ बढाए
उपत्यका नछोड्न आफ्ना सांसदहरूलाई प्रचण्ड-माधव पक्षको निर्देशन
पचास हजार घुससहित सशस्त्रका इन्स्पेक्टर र सई पक्राउ
नेपालको यो तस्बिर बन्यो विश्वमै दोश्रो
मुख्य पृष्ठअन्तरास्ट्रियभारत: एयरफोन लगाएर हिं’ड्दै थिइन्, ए’क्कासी यस्तो भयो कि पत्तो नपाउँदै गु’माइन् ज्यान !
भारत: एयरफोन लगाएर हिं’ड्दै थिइन्, ए’क्कासी यस्तो भयो कि पत्तो नपाउँदै गु’माइन् ज्यान !
एजेन्सी – भारत हो’शंगाबादस्थित ए’नएच ६९मा एक महिला रे’ल्वे ट्रया’क पा’र गर्दै थिइन् । त्यसक्रममा उनी यति ला’परवाह भइन् कि उनले आफ्नै ज्या’न गएको पनि प’त्तो पाइनन् । सामान्य ला’परवाही, एक मोबाइल र ए’यरफोन नै उनको का’ल बन्यो । खा’समा हो’शंगाबादकी एक स्था’नीय महिला पै’दल हिं’ड्दै थिइन्। त्यसक्रममा उनले ए’यरफोन ल’गाइरहेकी थिइन् । ए’यरफोनका कारण उ’नको का’न लगभग ठ’प्प जस्तै थियो । उनी गु’ज्रिरहेको बाटोमा रे’लवे क्र’सिंग थियो।
ए’यरफोन लगाएकै कारण उनले रेल आएको ढिला मात्र चा’ल पाइन्। उनले चा’ल पाउँदा सम्म रेल उनको नजिक आइसकेको थियो। भा’ग्ने को’शिस गरेपनि उनी सफल हुन सकिनन्। अन्ततः उनलाई रे’लले सो’रेर लग्यो। रे’लको ठ’क्करबाट ज्यान गु’माउने स्थानीय चं’दा सो’नी रहेको भा’रतीय संचार माध्यमहरुले जनाएका छन्। उनी सा’मुदायिक स्वास्थ्य के’न्द्र डो’लरियामा अ’नमी रहेको बताइएको छ। उक्त घ’टना सि’सिटिभीमा समेत कै’द भएको थियो। त्यस घ’टनाको भिडियो सामाजिक संजाल तथा मिडियाहरुमा समेत आएका छन्।
साना-साना ला’परवाहीले पनि ज्या’न जा’न सक्छ भन्ने कुरा कसैले न’कार्न सक्दैन। धेरै नै सामान्य सो’चिएका ला’परवाहीले ज्या’न लिएका उ’दाहरण मध्ये माथि उ’ल्लेखित घ’टना पनि एक हो। ए’यरफोन लगाएर सडकमा सकेसम्म न’हिंडेकै राम्रो हुने सु’झाव वि’ज्ञहरु दिन्छन्।
बेलायतका पूर्व गोर्खाहरु घरबाट नि’कालिए
नेपालमा राजनीति बिग्रेकै बेला अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनले भने, हामी तपाईहरुको साथमा छौ
जापानमा आ’पतकाल अ’न्त्य गर्ने तयारी, मन्त्रीहरुलाई भेट्दै प्रधानमन्त्री सुगा
मलेसियामा कोरोना विरुद्धको खोप सुरु, पहिलो खोप प्रधानमन्त्री यासिनलाई ।
अब दुबइ एयरपोर्टमा पासपोर्ट देखाउनु नपर्ने, यात्रुको अनुहार नै पासपोर्ट !
प्रयोग भइसकेको क’ण्ड’म ब’टुलेर यी महिलाले ग’र्थिन यस्तो काम’ थाह पाउदा प्रहरी प’र्यो च’कित्
संसार नै छ’क्क पार्ने १५ अ’चम्मका जोडीहरू (भिडियो)
पूर्व सांसदको छोराः प्रेमिकासंग बस्न ‘ग’र्भवती’ श्रीमतीलाई कार दुर्’घटना ग’राएर सि’ध्याए
भी’षण दु’र्घटना- सयौं यात्रीहरु आ’त्तिएर चि’च्याइरहे, विमान ज’लेर ख’रानी भयो, विमानमा सवार सबैको मृ’त्यु
अमेरिकी अन्तरिक्षयान पृथ्वीबाट उ’डेको ७ महिनापछि मंगल ग्रहमा अवतरण, वैज्ञानिकहरु चि’च्याए